Candy · Avrily 2013 · Global Voices teny Malagasy
Candy · Avrily, 2013
Lahatsoratra farany an'i Candy tamin'ny Avrily, 2013
Afrika Mainty21 Avrily 2013
Tanora Angole mpitoraka bilaogy sady "mpampita vaovao" monina any Loandà i Rosie Alves, 21 taona, avy ao Loanda, manoratra tantara fohy izay mazàna miresaka ny fitiavana sy ny finamànana akaiky ao amin'ny bilaoginy "Sweet Cliché". Zarainy amin'ny Global Voices ny aingam-panahiny sy ny hetahetany, ilazany amintsika misimisy kokoa mikasika ny...
Azia Atsinanana20 Avrily 2013
Topimaso Mivantana Tsy Fahita Firy Amin'ny Indostrian-damaody Pakistane Vao Mivoatra
Azia Atsimo17 Avrily 2013
Raha tsy dia mahaliana ny firenen-kafa izany, manana anjara toerana lehibe kosa ny lamaody amin'ny fiainana Pakistane. Halefa mivantana amin'ny aterineto ny Herinandron'ny Lamaody any Pakistàna ny 9-10 Aprily, avy any Karachi ka hitondra endrika vaovao amin'ny indostria vao misandratra sy efa matianina izay mampiseho fa tsy henjana na mpiaro...
“Hadihadian'ny Mpampanoa lalàna” ireo Fikambanana Tsy Miankina Any amin'ny Faritanin'ny Rosia
Eoropa Afovoany & Atsinanana14 Avrily 2013
Ireo mafana fo an'ny DemVybor any amin'ny faritr'i Voronezh dia nitatitra tao amin'ny blaogin'ny DemVybor [ru] fa manao fanadihadiana any amin'ireo Fikambanana tsy miankina (ONG) ny biraon'ny mpampanoa lalàna any an-toerana. Ireo fikambanana efatra nokendrena dia samy ao anatin'ny Tranoben'ny Zon'Olombelona ao Voronezh [ru] avokoa
Mampihomehy Ireo Arabo Ny Fandrahonana Nokleary Ataon'ny Korea Avaratra
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana08 Avrily 2013
Nampihomehy Arabo maro mpampiasa aterineto ny fandrahonan'ny Korea Avaratra ny hanafika ireo toby miaramila amerikana, anisan'izany ireo mitoby any Amerika.
28 000 Ireo Renirano Nanjavona Tamin'ny Sarintany Sinoa
Azia Atsinanana08 Avrily 2013
Araka ny angona nataon'ny governemanta momba ny rano, dia miisa 28 000 eo ho eo ireo renirano nanjavona tany Sina. Nilaza ny manam-pahaizana malaza iray momba ny tontolo iainana fa noho ny fitrandrahana diso tafahoatra ny renirano sy ireo tetikasa "hydroélectrique" goavana no mahatonga izany faharitràna izany.